China China ọhụrụ style ntutu ntutu ahịhịa na emepụta | Yongsheng
N'afọ 1953, 1952
Tupu mmepụta ----nlele---- nkwenye-Ihe---- ịzụta-akụrụngwa ----akụkụ---- Ọgwụ-Ogo---- nnyocha-Akụrụngwa ----akụkụ ----elu---- imecha-Ogo ----nnyocha-Nzukọ-Ogo ----nnyocha-Mbukota.
Anyị nwere ndị na-ewu ewu na ejiji ịke ntutu brushes.
Nwere ike ịhọrọ agba ifuru UV na-emecha ntutu isi, Agba nchara ntutu kpochapu ntutu na naịlọn bristles, Yi roba mkpuchi mmiri ahịhịa na oghere na kwushin, Agba mmiri ahịhịa na roba mkpuchi, Ifuru grajentị UV eletrik gwụ ntutu ntutu, ahịhịa kpochapụwo fom ntutu ntutu, Teasing ahịhịa na bristles na naịlọn mbuaha, Wet ahịhịa na 3D-ebi akwụkwọ na agba imewe.
Anyị nwere ihe ọhụụ na-atụ anya plastik, osisi na achara. Ọ bụ Biomass ihe mejupụtara. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke na-eguzogide ọgwụ nke nwere ihe macromolecular na ihe biomass. Ebe ọ bụ na ọdịnaya nke ihe ọhụrụ gburugburu ebe obibi karịrị 50%, ngwaahịa a nwere uru nke nchebe gburugburu ebe obibi na obere carbon. Anyị nwere eriri bamboo na ahịhịa dị.
Ise njakịrị nwere ike melite styling akara na Nchikota nke boar na naịlọn bristles. Dọ ọdụ ejiri akara na-egosipụta njedebe maka ịhapụ, nkewa na mmetụ ikpeazụ. Short boar bristles iji mee ka esemokwu na-enwu gbaa ma na-acha odo odo na tourmaline enwekwuru nylon bristles na-agagharị na ntutu. Boar bristles na-ehicha ma na-edozi ntutu ma na-ekesa mmanụ sitere na ntutu isi.
A na-eji ajị agba ntutu isi mmiri maka ntutu isi nke ihe eji eme ihe, ihe nro na-eweta ịdị ike na ịdị ogologo. Zuru oke ngwọta na ntutu winding, electrostatic nsogbu na mfe ọcha.
Nke gara aga: Osisi na achara ntutu ahịhịa
Osote: Obere ntutu ntutu na mkpuchi roba, UV eletrik, mbufe mmiri
Omenala Achara Azu ahịhịa
Kanye Ahịhịa ahịhịa
Oem achara ntutu ntutu
Ọrụ ahịhịa ntutu ntutu
Osisi Paddle Hair Brush